Mabhuku manomwe pamusoro paJulius Caesar pazuva rekuzvarwa | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Biography, Comics, Mabhuku, Novela, Theater
Mutambi weIreland Ciarán Hinds saJulius Caesar wepaterevhizheni Roma, kubva kuHBO. Mutsara uyu unobva kuna William Shakespeare's Julius Caesar.
Julius Caesar akaona mwenje mukati Roma el Chikunguru 13, 100 pamberi paKristu (maererano nezuva rinogamuchirwa kwazvo), saka chirangaridzo chitsva chekuzvarwa kwake chinoyeukwa Icho chimwe yevatambi vakakurumbira yenhoroondo yevanhu uye tese takaverenga, takaona uye takanzwa chimwe chinhu nezvazvo. Uye nerombo rakanaka isu tichiri kukwanisa kumuverenga.
Ndiani akadzidza iyo baccalaureate ye mavara akachena takadzidza pfungwa dzekutanga dzechiLatin nazvo Gallia est omnis divisa muzvikamu zvitatu, kubva kwaari YeGalico yakanakala Gallic hondo. Uye vana vazhinji vachange vachidzidza kuverenga pamwe neanouya uye zvakashata zvevarombo Julio neavo vasingadzoreki maGauls eAsterix naObelix. Asi ngationgororei aya mabhuku manomwe yezvinyorwa zvakawanda nezvake semunhu mukuru uye nhoroondo kana se hunhu yemanoveli nemitambo.
Ngatitangei neakanyanya kujairika.
1 Humwe Upenyu - Plutarch
2 Hupenyu hwamwari Julius Caesar - Suetonius
4 Rega. Iyo Tsananguro Biography - Adrian Goldsworthy
5 Iko zvikomo zvinowungudza - Francisco Narla
6 Kesari - Colleen McCullough
7 Julius Caesar nehondo yeGallic - Anne-Marie Zarka
Upenyu hwakafanana - Plutarch
ari nhoroondo yeiyi vhoriyamu chikamu chebasa remunyori wechiGreek uyu uye muzivi kwaanonamata kuGirisi neRoma. Saka, zvinopesana ne chimiro chikuru chechiGiriki nemumwe murume. Plutarco anorondedzera aya hupenyu kubva paudiki hwake uye nekudzidziswa kusvika parufu rwake. Anonyora nhoroondo yezvakaitika zvakare nekudhirowa mufananidzo wepfungwa wevatambi unochengetedza chinangwa chetsika.
Hupenyu hwamwari Julius Caesar - Suetonium
Munyori wenhoroondo Suetonio Tranquilo Kiyi (c. 69-140 AD) akazvarwa pakauya hutongi hwaFlavia. Akashanda muRoma kwakawanda kwehupenyu hwake uye aive achishandira mambo Trajan. Gare gare, uye semunyori panguva ya Adriano, akakwanisa kuwana zvinyorwa zveumambo. Mavari makawanikwa tsamba pakati paKesari naOctavio Augusto, zvinhu zvaakashandisa zvake Hupenyu hwevaKesari gumi nevaviri, rake rinozivikanwa basa.
Izvi ndizvo rekutanga remabhuku masere iro rinoumba iro basa, mune gumi nembiri nhoroondo dzakanyorwa. Suetonius aida kuzivisa uye kuseka nezvehunhu hweumambo. Mune toni iyoyo achataura hupenyu hwaKesari, kubva asati amuka kuva nesimba kusvika parufu rwake, achipfuura noupenyu hwake netsika.
Chii chingataurwa nezvazvo rimwe remabasa anozivikanwa kwazvo yeakakurumbira echirungu bard munyika. Shakespeare anofanira kunge akazvinyora pairi 1599. Dzokorora rangano yekurwisa Emperor weRoma Julius Caesar, kupondwa kwake uye nemhedzisiro yacho. Iyo ndeimwe yemabasa mazhinji eShakespearean anoenderana nezvakaitika zviitiko.. Shanduro dzayo dzakasiyana mu firimu uye yemitambo ndiyo yakanaka chinotsiva yakasarudzika neyemhando yepamusoro, asi chakakosha chinofanira kuverengerwa.
Rega. Iyo yakajeka biography - Adrian Goridhe
Adrian anokodzera goridhe munyori wenhoroondo weBritish, nyanzvi mu yechinyakare nhoroondo yemauto. Mune ino biography touch zvese zvehupenyu hwaCésar, kubva pane zvaakawana muchiuto uye mune zvematongerwo enyika kusvika kuzvinonyadzisa uye zvinangwa zvake zvakanyanya.
Mufananidzo mukuru wechimiro cheuyo aiziva kusimuka kubva murima rakazara kuti ave murume akapfuma kwazvo pasirese uye akabata simba inokwanisa kupedza iyo Republic yeRoma. Asi parufu rwake Kesari akatonga dzinenge nyika dzese dzinozivikanwa uye izvo charisma inotsungirira mushure memakore anopfuura zviuru zviviri.
Ikoko zvikomo zvinowungudza - Francisco Narla
Ndatokurudzira Kanopfuura kamwe chete aya makuru mabhuku akanyorwa nemunyori wechiGalician uyu ane mukurumbira pamanhoroondo ake enhoroondo. Uye ndinozviitazve nekuti kuverenga kwayo kwakanakira mazuva ano ezororo.
Boka re mauto akatendeka kuna Julius Caesar ita sechipuka uye vazvipe ivo kurudzi rwemadzitateguru Galicia kuuraya mapere ari kupedza zvipfuyo zvavo. Vanoda kuudzwa nzvimbo yengano migodhi yegoridhe. Kubva kwavari tenzi weRome anotora simbi yakakosha iyo yaachaendesa kuSeneti. Asi riini vanouraya mhumhi ine pamuviri, murume wekupedzisira mupenyu, mhumhi ine hunyanzvi uye hombe, ichavadzingira kuRoma pachayo kuti vatsive uye kudzvinyirira zvakavanzika zvirongwa zvaJulius Caesar.
Iyi ndiyo mhedzisiro yepentalogy yakatsaurirwa kuRoma Yekare yeiyi munyori akabudirira weAustralia, akashaya makore maviri apfuura. Mhanya iyo gore 54 ku. JC naCayo Julio César fambira mberi kuburikidza ne Gaul kupwanya madzimambo emhare dzinoyambuka nzira yavo. Kukunda kwake muzita reRoma kwakajeka, asi vatungamiriri veRepublic vanotya vavariro yavo isina muganho zvakanyanya. Ndeipi nzira iyo murume akangwara kwazvo wemauto muRoma anogona kuenda? Cato neSeneti pavanomutengesa, Kesari, pamahombekombe eRwizi rweRubicon, anoita sarudzo yakakosha muhupenyu hwake: kupandukira nyika yake isingaongi.
Julius Caesar na lKuGallic War - Anne-Marie Zarka
Este bhuku remifananidzo rakafuridzirwa na Makomendi paGallic Hondo rakanyorwa naJulius Caesar pachake. Izvo zvakagadzirirwa vaverengi vane makore ari pakati pe ane makore gumi nerimwe negumi nemana uye isumo yakanaka kwazvo kunhoroondo yehushe hweRoma. Chitsauko chimwe nechimwe chinosanganisira mitambo kurodza pfungwa uye kutarisa kunzwisisika kwenyaya uye mazwi. Kune mamwezve mapepa mapepa ekuvandudza yako tsika yakawanda uye kuziva kwake nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Biography » Mabhuku manomwe pamusoro paJulius Caesar pazuva rekuzvarwa kwake
Mabhuku matanhatu nevanyori kubva kuReal Sitio uye Villa de Aranjuez. 6st kuburitsa.